MADHAV PANDEY: 09/01/2010 - 10/01/2010
फत्तेमान राजभण्डारी अनी संगीत
फत्तेमान राजभण्डारीको जन्म १९९३ साल मङ्सिर पूणिर्माको दिनमा पशुपति, देवपत्तनमा भएको हो । पिता जीतमान राजभण्डारी र आमा पूर्णमाया भण्डारीका तेस्रो सन्तान को रुप मा गायक को जन्म भएको हो ।
फत्तेमान को बुबा अमालकोट कचहरी-पशुपतिनाथको जग्गाजमिन रेखदेख गर्ने र पर्व चलाउने कार्यालय) को हाकिम द्वारे हुनुहुन्थ्यो । पशुपतिनाथका राजभण्डारीले पशुपतिनाथमा भण्डारेको रूपमा रहेर काम गर्नुपर्छ । यसरी भण्डारेको रूपमा काम गर्ने राजभण्डारीहरू चार खलक छन् । यी चार खलकमध्ये उहाको परिवार पनि एक हो ।
पशुपतिको भण्डारे भएका नाताले उहाँको परिवारमा व्रतबन्ध गर्दा व्रतबन्ध गर्नुअघि सुपारी र दाम राखेर राजाकहाँ विन्ती गर्नुपर्ने चलन थियो । सोही चलनअनुसार नौ वर्षको उमेरमा उहाँको पनि व्रतबन्ध गर्नका लागि सुपारी र दाम राखेर राजाकहाँ विन्ती गरियो ।
राजाबाट व्रतबन्ध गर्नका लागि हुकुम भएपछि उहाँलाई चार दिन पशुपतिको भण्डारमा लगेर राखियो । भण्डारभित्र बसेपछि बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गर्नुपर्ने, चोखो खानुपर्ने र घर पनि आउन नहुने नियम पालना गर्नुपथ्र्यो । पशुपतिको भण्डारमा यसरी राख्नु पनि व्रतवन्धका लागि गरिने संस्कार नै हो । यसरी उहाँको व्रतबन्ध भयो । व्रतबन्ध भएपछि भण्डारे बस्नका लागि फत्तेमानको कर्म चल्यो र नौ वर्षको उमेरमा भण्डारे हुनुभयो ।
शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने, त्यतिबेला बूढापाकाहरू अङ्ग्रजीलाई गाईखाने अक्षर पढ्नुहँदैन भन्थे । त्यसमाथि पशुपतिनाथको भण्डारे भएर बस्ने परिवारले त यो अक्षर पढ्नै हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । संस्कृत पढ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर दरवार हाइस्कुलमा १२-१३ वर्षको उमेरमा संस्कृत पढ्नका लागि दुईचार महिना जानुभयो र पद्मोदय हाइस्कुलमा पनि ५ कक्षासम्म पढ्नुभयो ।
घरको परिस्थितिले गर्दा यसपछि भने उहाँले पढ्न पाउनु भएन ।
फत्तेमान सानो छँदा शिवरात्रिमा वर्षको वर्षमा एकपटक सात दिनमात्र भारतीय तीर्थयात्रीहरू पशुपति आउन पाउँथे । शिवरात्रिमा आएका भारतीय तीर्थयात्रीहरू सातदिन पछि पनि फर्केर नगए खोजी खोजी गढी-बार्डभञ्ज्याङ) कटाइन्थ्यो । यो समयमा भारतबाट भारतीय भजन गायकहरू आउँथे ।
भारतीय दूतावासले पनि भारतबाट भजन गायकहरू ल्याएर कार्यक्रमहरू गर्दथ्यो । त्यसैगरी पशुपतिको मन्दिरमा पनि नित्य भजन हुने गर्दथ्यो ।
चार-पाँच वर्षकै उमेरमा बुबाले यस्ता भजन भएका ठाउँमा उहाँलाई लिएर जानुहुन्थ्यो । यसरी जाँदा उहाँलाई गीतसङ्गीतप्रति रुचि बढ्दै गयो । फत्तेमानको बुबा पनि गाउन र बजाउन सिपालु हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै वर्षमा एकपटक गाईजात्राको समयमा थिएटर-नाटक) देखाइएको थियो । टोलटोलका समूहले देखाउने यस्ता थिएटर पहिले राणाको दरवारमा गएर देखाउनुपथ्र्यो ।
देवपत्तन समूहले देखाउने थिएटर राणाको दरवारमाभन्दा पहिले पशुपतिमै देखाइन्थ्यो । यस्ता थिएटरमा पनि फत्तेमानले बालबालिकाको भूमिकामा खेल्नुभएको थियो ।
रेडियो नेपालको स्थापना भएपछि फत्तेमानलाई रेडियोमा गाउने तीब्र इच्छा थियो । रेडियोमा गाउनका लागि छ महिना धाएँ तर पालो आएन र जानै छाड्नु भयो। २०१८ सालतिर नातिकाजीले रेडियोमा गाउने होइन भनेर लानुभो । पाँच वर्षदेखि गाउन थालेपनि पच्चीस वर्षको उमेरमा पहिलोपटक रेडियोमा 'हे राम नाम प्रभुको, जप्दै प्राण यो जाओस्' भजन पहिलो गीतको रुपमा रेकर्ड गराउनु भयो ।
पछी सुन्ने मान्छेले पनि राम्रो छ भनेर हौसला दिन थाले । त्यतिबेला रेडियोमा गाउनका लागि रेडियोले गायकलाई तीन महिना अगाडि पत्र पठाउँथ्यो । यसैगरी उहाँलाई पनि एउटा पत्र यो भजन गाएपछि आयो तर कुन गीत कसरी गाउने भनेर उहाँ अन्योलमा पर्नु भएको थियो । अनि पत्र लिएर नातिकाजीकहाँ जानुभयो र उहाँले गीत र सङ्गीत तयार गरिदिनुभयो र त्यही गीत तीन महिनसम्म रियाज गरेर 'लाइभ' रेकर्ड गराउनु भयो । र यो गीत गाए वापत दश रुपियाँ पाउनुभयो । गायकलाई यसरी गीत गाउन पनि वर्षमा एकपटक मात्र पालो आउँथ्यो ।
भारतिय सङ्गीतज्ञ गुरुदास गोख्ले २०१७ सालतिर नेपाल आउनुभयो । फत्तेमानले उहाँसँग छ महिनाजति सङ्गीत सिक्नु भएको थियो। त्यसपछि २०१९ सालतिर एकेडेमीमा सङ्गीत शाखा खुल्यो र शाखा खुलेपछि प्रो. रामप्रसाद रायसँग चार-पाँच वर्षसम्म शास्त्रीय सङ्गीत सिक्न भएको थियो ।
रेडियो नेपालमा उहाका आधुनिक, भजन, राष्ट्रिय र लोक गरी चार सयवटा गीत अहिलेसम्म रेकर्ड भइसकेका छन् । बीस-पच्चीसवटा गीतमा सङ्गीत दिनु भएको छ भने पन्ध्र-बीस वटा जति गीतको रचना पनि गर्नु भएको छ ।
फत्तेमानले सर्वप्रथम २०२५ सालमा रेडियो नेपालबाट आयोजित राष्ट्रव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगितामा, 'यस्तो पनि हुदो रै'छ जिन्दगिमा कैले कैले 'बोलको गीत गाएर राजा महेन्द्रबाट प्रथम भएर स्वर्णपदक प्राप्त गर्नु भएको थियो । यसपछि २०५२ सालमा छिन्नलता पुरस्कार ,२०५५ मा प्रबल गोरखा दक्षिणबाहु लगायत हालसम्म डेढसय जति पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ ।
२०५९ साल साउन २५ गते बिशाल एकल कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएका फत्तेमानअझै पनि हरेक बिहान दुई घण्टा हार्मोनियमको तालमा रियाज गर्नु हुने गायक एबमं सङ्गीतकार फत्तेमानको जिन्दगीनै सङ्गीत साधनामा ब्यतित गर्दै हुनुहुन्छ।
अझै पनि गीत-सङ्गीतको क्षेत्रमा केही जानेकै छैन जस्तो लाग्छ उहाँलाई। फत्तेमान राजभण्डारीको जन्म १९९३ साल मङ्सिर पूणिर्माको दिनमा पशुपति, देवपत्तनमा भएको हो । पिता जीतमान राजभण्डारी र आमा पूर्णमाया भण्डारीका म तेस्रो सन्तान को रुप मा गायक को जन्म भएको हो । फत्तेमान को बुबा अमालकोट कचहरी-पशुपतिनाथको जग्गाजमिन रेखदेख गर्ने र पर्व चलाउने कार्यालय) को हाकिम द्वारे हुनुहुन्थ्यो ।
पशुपतिनाथका राजभण्डारीले पशुपतिनाथमा भण्डारेको रूपमा रहेर काम गर्नुपर्छ । यसरी भण्डारेको रूपमा काम गर्ने राजभण्डारीहरू चार खलक छन् । यी चार खलकमध्ये उहाको परिवार पनि एक हो ।
शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने, त्यतिबेला बूढापाकाहरू अङ्ग्रजीलाई गाईखाने अक्षर पढ्नुहँदैन भन्थे । त्यसमाथि पशुपतिनाथको भण्डारे भएर बस्ने परिवारले त यो अक्षर पढ्नै हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । संस्कृत पढ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर दरवार हाइस्कुलमा १२-१३ वर्षको उमेरमा संस्कृत पढ्नका लागि दुईचार महिना जानुभयो र पद्मोदय हाइस्कुलमा पनि ५ कक्षासम्म पढ्नुभयो । घरको परिस्थितिले गर्दा यसपछि भने उहाँले पढ्न पाउनु भएन ।
फत्तेमान सानो छँदा शिवरात्रिमा वर्षको वर्षमा एकपटक सात दिनमात्र भारतीय तीर्थयात्रीहरू पशुपति आउन पाउँथे । शिवरात्रिमा आएका भारतीय तीर्थयात्रीहरू सातदिन पछि पनि फर्केर नगए खोजी खोजी गढी-बार्डभञ्ज्याङ) कटाइन्थ्यो । यो समयमा भारतबाट भारतीय भजन गायकहरू आउँथे । भारतीय दूतावासले पनि भारतबाट भजन गायकहरू ल्याएर कार्यक्रमहरू गर्दथ्यो । त्यसैगरी पशुपतिको मन्दिरमा पनि नित्य भजन हुने गर्दथ्यो । चार-पाँच वर्षकै उमेरमा बुबाले यस्ता भजन भएका ठाउँमा उहाँलाई लिएर जानुहुन्थ्यो । यसरी जाँदा उहाँलाई गीतसङ्गीतप्रति रुचि बढ्दै गयो ।
फत्तेमानको बुबा पनि गाउन र बजाउन सिपालु हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै वर्षमा एकपटक गाईजात्राको समयमा थिएटर-नाटक) देखाइएको थियो । टोलटोलका समूहले देखाउने यस्ता थिएटर पहिले राणाको दरवारमा गएर देखाउनुपथ्र्यो । देवपत्तन समूहले देखाउने थिएटर राणाको दरवारमाभन्दा पहिले पशुपतिमै देखाइन्थ्यो । यस्ता थिएटरमा पनि फत्तेमानले बालबालिकाको भूमिकामा खेल्नुभएको थियो ।
२०५९ साल साउन २५ गते बिशाल एकल कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएका फत्तेमानअझै पनि हरेक बिहान दुई घण्टा हार्मोनियमको तालमा रियाज गर्नु हुने गायक एबमं सङ्गीतकार फत्तेमानको जिन्दगीनै सङ्गीत साधनामा ब्यतित गर्दै हुनुहुन्छ। अझै पनि गीत-सङ्गीतको क्षेत्रमा केही जानेकै छैन जस्तो लाग्छ उहाँलाई।
Source : www.artistnepal.com
Posted by MADHUR SARGAM at 7:53 PM No comments: Links to this post
भजनशिरोमणि भक्तराज आचार्य
भजनशिरोमणि भक्तराज आचार्यले सन् १९४२ मा धनकुटामाआमा रेनुका आचार्य र बुबा बलभद्र आचार्य को कोख बाटजन्म लिनुभएको थियो । भक्तराज आचार्यले जन्मेको साढेएक वर्षमानै आफ्नो बुबाको माया बाट बाञ्चित हुनु परेकोथियो । त्यस पछि गाउँमा महामारी फैलिएपछि आमा रेनुकाआचार्यसँग भक्तराज आचार्यपनि भारतको सिक्किम जानुभयो । सिक्किम गएर पनि सानै देखी सङ्गीतमा रुची राख्नेभक्तराज आचार्यलाई सङ्गीतको मोहले छाडेको थिएन ।
अझ पछि आफ्नो आमाले पनि कामगर्न नसक्ने अवस्थाआएपछि परिवारको एक्लो छोरा भक्तराजले सानै उमेरमापारिवारिक जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु परेको थियो । त्यसैले उहाँको बाल्यकालको समय त्यति सुखद रुपमा बित्न सकेन। वेस्ट बंगालको डुवर्समा पनि भक्तराज आचार्यको बसाई त्यति सहज थिएन ।
सानै देखी सरस्वती पुजा लगायत अन्य कार्यक्रममा मौका पाउने बित्तिकै आफ्नो प्रतिभा देखाउन पछी नपर्ने भक्तराजकोबाल्यकाल र युवा अवस्थाका केही क्षणहरु पनि त्यतै बिते । भारत बसाईको क्रममा भक्तराजले ईलाहाबादबाट संगितसम्बन्धी औपचारिक शिक्षा पनि लिनु भएको थियो तर त्यती बेला सम्म भने उहाँको सांगितिक यात्राले त्यति फड्कोमारिसकेको थिएन र सांगितिक ज्ञान भएर पनी कुनै गित रेकर्ड गर्नु भएको थिएन ।
सांगितिक यात्राको शुरुवात:
.सं. २०३० मा काठमाडौंमा भएको “अधिराज्यव्यापी राष्ट्रिय गित प्रतियोगिता” मा भाग लिए पछी भने उहाँकोसांगितिक जिवनले अग्रगती लिन थाल्यो । त्यसबेला उहाले गाउनु भएको राष्ट्रिय गित “होसियार यसबखत समयकोमुखलाई चिन....” भन्ने गित बाट उहाँले 'गोल्ड मेडल' प्राप्त गर्नु भएको थियो । त्यस गितमा उहाँले मात्र नभईरचनाकार तथा सङ्गीतकार अम्बर गुरुङले पनि 'गोल्ड मेडल' प्राप्त गर्नु भएको थियो । यो गित नै उहाँले गाएको पहिलोगित थियो ।
त्यसपछि उहाँले रेडियो नेपालमा जागिर पाउनु भयो र उहाँको स्वरमा पहिलो पटक “मलाई जिवन चाहिन्छ....” बोलकोगित रेकर्ड भयो । यो गित बाट शुरु भएको उहाँको सांगितिक यात्रा त्यति सहज भने रहेन । त्यो बेलामा पनि उहाँकोआफ्नै शैली र पहिचान थियो । कतिले त उहाँको प्रतिभा देखी डराएर उहाँलाई अरुको गित गाउने, गित गाउन नसक्नेसम्म भने तर उहाँको पछाडी भने उहाँको कला देखी डराउथें ।
वि.सं. २०३० देखी २०४६ साल सम्मको साँगितिक यात्रामा उहाँले करीब ४५० वटा गितहरु गाउनु भयो जुन गितहरु अझैपनी हाम्रा माझ अमर र अजर भएर गुञ्जिरहेका छन । यति मात्र होईन उहाँले गाउनु भएका यत्तिका गितहरु मध्ये२०-२५ वटा गितहरुमा बाहेक उहाँले आफ्नै कम्पोजिसनमा तयार पार्नु भएको छ ।
उहाँको प्रतिभा र आँट देखेर डराउनेहरुले उहाँलाई अरुको गित गायो भनेर भनेपनि उहाँको पछाडी उहाँकै प्रशंशा गर्नेगर्दथे ।
त्यही कुरा बाट प्रभावित भएर उहाँले आफ्नो कम्पोजिसनमा धेरै गितहरु गाउउनु भएको छ । उहाँका छोरा तथा गायकस्वरुपराज आचार्य भन्नुहुन्छ -“त्यती बेला रेडियो नेपालमा केही व्यक्तिहरुको हालिमुहाली भएकाले गर्दा पनि भक्तराजआचार्यले आफुलाई माथी उठाउन र आफ्नो पहिचान बनाउन धेरै संघर्ष गर्नु परेको थियो, त्यो बेला रेडियो नेपालमा धेरैअस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्थ्यो । मेरो बुबा आफ्नो प्रतिभा र गायकिले गर्दानै यति माथी सम्म उठ्न सफल हुनुभएको हो ।तर यसको लागी उहाँले धरै दुख भोग्नु भयो यतिकि सायद अरु कुनै मानिस भएको भए उसले ति मानिसहरुको व्यावहारदेखी आजित भएर गित रेकर्डनै गर्ने थिएन ।
भक्तराज आचार्यको कालो समय:
समयको चक्र सँगै अगाडी बढिरहनु भएका भक्तराज आचार्यलाई २०४६ सालमा एउटा बज्रपात आईलाग्यो जुन घटनालेभक्तराज आचार्यलाई र उहाँको परिवारलाई एउटा संकटमा धकेलिदियो । निकै मेहनती र आफ्नो कुरामा अडिग रहनेभक्तराज आचार्य माथी काठमाडौंको बौद्दमा सांघातिक हमला भयो । जसको कारणले उहाँको टाउकोमा १०० वटा टाँकालगाउनु परेको थियो ।
त्यो हमला कसैको षडयन्त्र हो जस्तो लाग्छ । उहाको प्रतिभा र गायन देखी धेरै डराउँथे जसले उहामाथि सांघातिकहमला गरेका हुन सक्छन । तर उहाँको त्यो चोट निको नहुदै उहाँलाई अर्को बज्रपात आईलाग्यो र उहाँको जिब्रोमादेखिएको सानो खटिराले क्यान्सरको रुप लियो जसको कारणले २०५० मा उहाँको जिब्रो काट्नु पर्यो र उहाँको सुरिलोस्वर हामीहरु माझ बाट टाढा भयो ।
अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा नेपाली सांगितिक क्षेत्रले एउटा बहुमूल्य प्रतिभाको आवाज लाई गुमायो र नेपाली सांगितिकक्षेत्रमा अपूरणिय क्षति भयो जुन क्षति सानो तपस्या र लगावले पुरा गर्न सम्भव छैन । “कोही नगरोस.... प्रेम अमरप्रेमको मूल्य कहाँ छ.....” यो गित नै उहाँको लागी अन्तिम गीत थियो , नेपाली संगीत ईतिहासको ।
Posted by MADHUR SARGAM at 6:48 PM No comments: Links to this post